Water sources for bees need enough surface areas to prevent bees from drowing.
Izinyosi zidinga amanzi ngezinhloso ezimbili eziyinhloko.
Okokuqala, amanzi asetshenziselwa ukunciphisa uju okhanyisiwe ukuze angenezelwe ekudleni.
Okwesibili, ama-honeybees adinga amanzi ukupholisa isidleke. Benza lokhu ngokushayela amanzi amancane lapho izinga lokushisa elingaphezu kwama-35°C. Ukukhuphuka kwamanzi kugobhoza umoya oshisayo ngaphakathi emngceleni futhi kusiza ukugcina umswakama wesimungulu ukuqinisekisa ukuthi amaqanda aqhwaqha.
Ebusika, ukuvuthwa ngaphakathi kwenzoma kufanele unikeze umswakama okwanele. Lokhu kungase kuvame ukukhiqiza amanzi amaningi, okwenza ukuba kuqhume. Lokhu kungase kubulale izinyosi uma kungekho umoya omuhle ngaphakathi kwe-hive.
Izinyosi zingadinga amanzi uma zihambisa imifantu emadolobheni amakhulu.
Indlela Yokufunza iZinyosi Ngamanzi
Izinyosi azigcini amanzi emzimbeni wazo kodwa zidinga ukuphuma futhi ziqoqe amanzi. Uma kungekho mthombo wamanzi wemvelo eduze komuthi, udinga ukondla amanzi ezinyosi zakho. Ukuba namanzi ahlanzekile aseduze kungasiza ukunciphisa amandla asetshenziswa izinyosi ukuyofuna amanzi.
Izinyosi zisondeza umswakama emhlabathini omanzi njengenhlabathi (noma ngisho nokugeza ngokumisa emgqeni) kunokusukela emanzini avulekile.
Isiqukathi esinendawo engaba ngu-75 cm² (cishe ngobukhulu be-tub g ye-margarine isembozo se-margarine) ikoloni ngayinye kufanele ifanele. Indawo yokufika kufanele ibe mkhulu kunendawo yokuchelela - isibonelo, isoso eligcwala ngamabhulebhu. Ngaphandle kwalokho, unikeze uhlobo oluthile lwedivaysi elintantayo noma i-twig ukugcina izinyosi zingena emanzini. Ungaphinde unikeze amanzi ezinkukhu zokudla kwezinkukhu ezigcwele amatshe ambalwa.
Uhlobo lokungenelela lwabagibeli lungasetshenziswa, kepha indawo yamanzi yomphakathi eduze nendawo yezinyosi ingaba efaneleka kakhulu. Qiniseka ukuthi lo mthombo wamanzi awubelwe ezinye izilwane.
Imithombo Yamanzi Eyaphambili Yezinyosi
Uma izinyosi zingalawula iziphuzo zabo, ngokuvamile zikhetha amanzi ngamanyolo. Ngokwesibonelo, bakhetha amanzi omchamo noma amanzi okudoba ngaphezu kwechibi. Ucwaningo lwamuva lubonise ukuthi izinyosi zikhethwa ngamanzi ngo-0.15- 0.3% usawoti (NaCl). Lokhu kungu-1 ithisipuni yesikasa esingekho idijithi ngamalitha angu-3.5 amanzi. Izinyosi nazo zikhetha amanzi afudumele kunama-18°C.
Uma unquma emthonjeni ongcono wezinyosi, kusiza ukucabanga njengezinyosi. Amehlo ka-bee (bobabili babo) bajwayele ukuthola izinguquko ekuhambeni nasezindabeni zokukhanya, kodwa ezindizayo ngokushesha futhi eziphakeme, kungenzeka bangaboni imithombo yamanzi.
Abacwaningi be-Bee bathole ukuthi izinyosi zibona amanzi ngokuhogela. Amanzi anuka njengomhlaba, izitshalo zamanzi, ukubola izitshalo noma ngisho ne-chlorine (amachibi okubhukuda) athakazelisa kakhulu izinyosi kunamanzi 'ahlanzekile'. Le mithombo yamanzi iqukethe amavithamini kanye namacronutrients angakwazi ukwandisa ukondla ubisi lwezinyosi.